အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးရှိသောအလုပ်သင်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ဂျိမ်းအဒမ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် ဧပြီလ 30, 2019 ဖတ်ပြီးသားမိ 4
pro လိုမျိုးဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကိုအမြဲတမ်းမသုံးသင့်ပါ။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအရွယ်အစား ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်နည်းအများစုကိုဖုံးလွှမ်းထားသည် - ယေဘုယျအားဖြင့် ၅.၅ "သို့မဟုတ် ၆"
သင်တို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာသံမဏိ ဒါကဓါးသွားတွေကိုပိုကြာကြာထိန်းထားပေးတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကတ်ကြေးချွန်စက်နဲ့အတူရှေ့ကိုနောက်လှည့်ထွက်ဖို့မလိုပါဘူး
offset ergonomic လက်ကိုင် အဆုံးသတ်နာရီများအတွက်ဖြတ်တောက်နေစဉ်ကြောင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်
Bevel သို့မဟုတ်ခုံးအစွန်း ဓါးရွက်
အကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေပါ ဤနေရာတွင်ဆံပင်ကတ်ကြေး & အစုံများ!
ရလဒ်ကတော့သင်ဟာတကယ့်လိုလားသူတစ် ဦး ဖြစ်လာဖို့လေ့ကျင့်နေတုန်းမှာအလုပ်သင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနဲ့ပါးလွှာတဲ့ကတ်ကြေးတစ်စုံကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသားများနှင့်အလုပ်သင်များအတွက်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးရှိသည့်ကတ်ကြေးများကိုကျွန်ုပ်တို့အပတ်တိုင်းမေးမြန်းခံရခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းအလုပ်သင်ကတ်ကြေး ၅ ခုကိုအတူတကွစုစည်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
အလုပ်သင် Scissor ငွေကောက်ခံ
အကောင်းဆုံးအလုပ်သင်နှင့်ကျောင်းသားကတ်ကြေး ၅ ခု
ထိုအကြောင်းကို Read ဤနေရာတွင်အကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်များ!
သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သင်ကတ်ကြေးအားလုံးကိုကျော်လွန်ပြီးဥရောပ၊ အမေရိကန်၊ သြစတြေးလျနှင့်အာရှတို့တွင်ကျေနပ်မှုအရှိဆုံးနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်တုံ့ပြန်မှုများရရှိထားကြသည်။
ကနေပိုပြီးရှာဖွေပါ Jaguar ဒီမှာကတ်ကြေးတံဆိပ်ပါ!
၄ င်းတို့သည်သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်၊ အခြေခံချွတ်ယွင်းသော Ergonomics ကိုအသုံးပြုသည်။
သာမှဒုတိယ Jaguar လူကြိုက်များဂျေး 2, အ Mina Matte Black သည်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကတ်ကြေးဈေးအပေါဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအဖြစ်ရောင်းချသည်။
အကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေပါ Mina ကတ်ကြေးတံဆိပ်အွန်လိုင်း!
၄ င်းတို့တွင်အခြေခံအနက်ရောင်ဒီဇိုင်း၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအတွက်ညှိနှိုင်းနိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဓါးသွားများကိုကြာရှည်စွာထိန်းထားနိုင်ရန်ဂျပန်စတိုင်ဝက်အူတင်းမာမှုစနစ်တို့ပါ ၀ င်သည်။
$ 200 အောက်တွင်တတိယအများဆုံးအသုံးပြုသောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးသည်၎င်းဖြစ်သည် Jaguar အကြိုစတိုင်စီးရီး။ နိုင်ငံတကာတွင် Pre Style Ergo P သည်လူကြိုက်အများဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။
ဤရွေ့ကားပြီးနောက်ပြီးနောက်အသုံးအများဆုံးအလုပ်သင်ဆံပင်ဖြတ်တောက်မှုကတ်ကြေးများဖြစ်ကြသည် Jaguar Jay 2. ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအများစုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Pre Style Ergo နှင့် Pre Style Relax ကတ်ကြေးများသည်ပိုမိုပေါ့ပါးသောခံစားမှု၊
4) Mina Kami ဆံပင်ညှပ်
Kami ဆံပင်ညှပ်ကအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် Mina။ ၎င်းတို့သည်ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ကြာရှည်စွာဖြတ်တောက်ခြင်းပြုလုပ်ရာတွင်သင့်ကိုအဆင်ပြေစေသည့်အခြေခံကျသောတည်နေရာပြ Ergonomics ရှိသည်။
လက်ကိုင်ဒီဇိုင်းသည် ဦး ခေါင်းကိုဖွင့်သည်။ သို့သော်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောဂျပန်သံမဏိများသည်ဤရောင်းအားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစေသည်။
Pink Pre Style ကတ်ကြေးများသည် ၂၀၂၀ တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအလုပ်သင်ကတ်ကြေးများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်လက်မှုပညာနှင့်ချစ်စရာကောင်းသောရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။
ဘေးထွက်မှတ်ချက်: ဤဆောင်းပါးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းများရရှိသည် အလုပ်သင်နေသည့်အချိန်ကာလအလုပ်အကိုင်များ Training.com.au ရှိဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအလုပ်သင်လမ်းညွှန် နှင့်ဂျပန်ကတ်ကြေးမှာရှိတဲ့အံ့သြဖွယ်ဝန်ထမ်း။
ဆံပင်ညှပ်သမားအများစုသည်သူတို့၏ဆံပင်ကတ်ကြေးများတွင် ၅.၅ လက်မနှင့် ၆ လက်မအကြားရှိသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားကျေနပ်စေရန်လိုအပ်သောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနည်းစနစ်အများစုကိုလွှမ်းခြုံထားသည်
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀ ကဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးများသည်လက်ကိုင်လက်ကိုင်ဖြင့်လာသည်။ သင်၏လက်ကောက်ဝတ်နှင့်တံတောင်ဆစ်များ၌ကြွက်တက်ခြင်းနှင့်ဖိစီးမှုသည်အမြဲတမ်းပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး offset ergonomic handles များရရှိနိုင်သည်။
ထိုအကြောင်းကို Read အမျိုးမျိုးသောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများ!
ကျောင်းသားများနှင့်အလုပ်သင်များအနေဖြင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးများကိုအွန်လိုင်းတွင်အဘယ်ကြောင့် ၀ ယ်နေကြရသည်ကိုရှာဖွေပါ။ ဆံပင်နှင့်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်အလုပ်သင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဆံပင်ကတ်ကြေးကို JapanScissors တွင်ရယူပါ။
ကျောင်းသားတွေနဲ့အလုပ်သင်တွေအတွက်စိတ်မကောင်းဘူး။ သူတို့ကအရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးအချို့လိုအပ်ပေမယ့်ကျောင်းတက်နေစဉ်ဒါမှမဟုတ်ဖြုန်းဖို့ပိုက်ဆံအများကြီးမရှိတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးကိုကျောင်းသားတွေနဲ့အလုပ်သင်တွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အချက်အလက်အချို့ပါတဲ့အတွက်ဒီဆောင်းပါးလေးကိုပထမစာမျက်နှာမှာချိတ်ထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။